SY52-3S telo-System - Sina Ningbo Samewe Computer
Gallary ny knitting santionany
SY52-3S tokana mandany tsaina anao koa anefa ny tsara sy ny fanjaitra droa tsaina anao koa anefa ny marokoroko fanjaitra, haingam-pandeha izany fiovan-javatra mahomby hampitombo ny hafainganam-pandehan'ny knitting amin'ny 20% -30%. Samy lafiny roa amin'ny grippers amin'ny fanapahana dia midika hoe hampihena kofehy mandany amim-pahombiazana sy hanatsara mamokatra. Andian-dahatsoratra ity no ampiasaina ny teknolojia nomerika mba hahatratra ny fakantahaka ny famindrana, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, toa shap ...
SY52-3S mandany tokana fanjaitra tsaina anao koa anefa ny tsara sy ny tsaina anao koa anefa ny marokoroko droa fanjaitra, haingam-pandeha izany fiovan-javatra mahomby hampitombo ny hafainganam-pandehan'ny knitting amin'ny 20% -30%. Samy lafiny roa amin'ny grippers amin'ny fanapahana dia midika hoe hampihena kofehy mandany amim-pahombiazana sy hanatsara mamokatra. Io andian-dahatsoratra no ampiasaina teknolojia nomerika mba hahatratra ny fakantahaka ny famindrana, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, toa famolavolana, miafina famolavolana sy ny hafa tsy tapaka fomba knitting miasa, izany ihany koa dia afaka raiki-pitia tsy ara-dalàna maro mena jacquard, intarsia, tariby sy ny pointelle structure lamina.
hijerena 3-5-7 • 5 • 7 • 9 • 10 • 12 • 14
knitting Width Miova tapaka lalan-dra, Max 52 "(132cm)
knitting Speed Max in 1.2m / seg, 24 Adjustable hafainganam-pandeha ambaratonga, baikoina toromarika.
stitch Density Rehefa niroso maotera fiara, tsara Tuning ny 0-365 isaky ny fizarana
tsaina anao koa anefa AC Servo maotera fiara, Max mirefy 1-tsaina anao koa anefa. 1/4, 1/2, 3/4 dity ary rongony-Tuning asa azo avy amin'ny toerana.
knitting System Single kalesy | Single rafitra.
Triangle Weaving Ny famolavolana mitambatra. Rafitra tsirairay dia afaka manao looping, tucking, fa tsy miara-knitting, ary koa ny famindrana eo aloha mankany aoriana, ka manangàna ny anoloana na izy roa miaraka aloha sy aoriana mivantana tsy misy famerana.
Needle Selection Rafitra tsirairay dia manana karazana be pitsiny 8 fanjaitra selectors, izay azo nametraka na nesorina fotsiny avy hatrany ny kalesy sy mora foana.
Needle bar Ny fanjaitra vy dia asisika ao amin'ny fanjaitra am-pandriana sy ny tany dia azo soloina rehefa tapaka
Takedown System Baikoina toromarika sy ny elektronika maotera fiara, miovaova 24 ambaratonga.
Drive System Fehezin'ny AC Servo Motor, fehin-kibo-nandroaka, 24 sehatra ny hafainganam-pandeha sy ny Adjustable selectable amin'ny ambaratonga tsirairay.
kofehy mitondra 2 * 8 kofehy mpitondra eo amin'ny lafiny tsirairay amin'ny 4 mpitari-dalana lalamby, switchable Na izany na tsy ao anatin'ny faritra knitting sakany.
Aza mihetsika Fa kofehy fiatoana, lehibe fatotra, lamba gazety-eny, fanjaitra breakage, over-Torque, nanakodia, fahadisoana tsaina anao koa anefa, tsy manara-penitra toerana ny Presser, tafahoatra kofehy na hahatratra ny famokarana ampinga lehibe.
Computer Unit Fanovana mety ho natao tamin'ny alalan'ny fampisehoana tontonana fandidiana, LCD lamba mba hampiseho angona.
Memory fahaiza 1024 * 4096, sakany na ny lavany ny fakantahaka dia azo ahitsy.
Data Storage USB fahan'ny
Display teny Sinoa sy Anglisy. (Ny hafa fiteny nangataka misy)
Power 3-dingana AC, 220V
fahafahana Factor 2.0kw / milina
Dimensions Length x Sakany x Heights
290 x 90 X 200cm (52 ​​"Series Net Weight - Approximately1000kg)
Previous: SY52-2S Double-System
Manaraka: 3D Vamp knitting Machine
3 System Flat knitting Machine
mandeha ho azy knitting milina
Automatic knitting Machine
Cashmere knitting Machine
Ordinatera Flat knitting Machine
Ordinatera Jacquard Flat knitting Machine
ordinatera knitting Machine
ordinatera Sweater knitting Machine
ordinatera Sweater Ny fanaovantsika Machine
Automatic tanteraka Shoe knitting Machine
High Speed ​​Flat knitting Machine
Jacquard knitting milina
raiki-pitia Collar Ary Sweater Machine
knitting Shoe Upper
Ningbo Shuangyu / Samewe Telo-System
Shuangyu / Samewe Flat knitting Machine
Shuangyu / Samewe Fly knitting
Shuangyu / Samewe Jacquard Flat knitting Machine
Shuangyu / Samewe Telo-System
Sweater knitting Machine Price
Telo System Sweater knitting Machine Price
Telo-System ordinatera Flat knitting Machine
Roa-System ordinatera Flat knitting Machine
Volon'ondry Sweater knitting Machine
Address: No. 118 Aza tia Tai Road, Jiao Chuan Street, Zhenhai District, Ningbo City, Sina
Phone: + 86-574-88165999